Press Release of the Foreign Ministers’ Meeting for the 7th CLMV Summit – MINISTRY of FOREIGN AFFAIR
Press Release of the Foreign Ministers’ Meeting for the 7th CLMV Summit
The Foreign Ministers’ Meeting for the 7th CLMV Summit was held in Nay Pyi Taw, MICC I on 22 June 2015 with the participation of Deputy Prime Minister and Foreign Minister from the Lao People’s Democratic Republic, the Foreign Minister from the Republic of the Union of Myanmar, the Deputy Foreign Ministers from the Kingdom of Cambodia and the Socialist Republic of Viet Nam.
The Meeting was chaired by Union Minister U Wunna Maung Lwin and the Draft Provisional Agenda of the CLMV Summit, and Draft Joint Statement of the CLMV Summit were discussed to be submitted to the Summit.
The Ministers also discussed and exchanged views on the economic cooperation among CLMV countries, trade and investments cooperation and development plans and financial assistance from international partners.
(၇)ကြိမ်မြောက် စီအယ်လ်အမ်ဗွီ ထိပ်သီးအစည်းအဝေး နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများ ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးအား ဇွန်လ (၂၂)ရက်နေ့က နေပြည်တော်ရှိ MICC I အဆောက်အဦတွင် ကျင်းပခဲ့ရာ လာအိုပြည်သူ့ ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်နှင်‌့ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး၊ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ကမ္ဘောဒီးယားဘုရင့်နိုင်ငံနှင့် ဗီယက်နမ်ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတနိုင်ငံတို့မှ ဒုတိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတို့ တက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ ကြပါသည်။
အဆိုပါ အစည်းအဝေးအား ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဦးဝဏ္ဏမောင်လွင်မှ သဘာပတိအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး၊ စီအယ်လ်အမ်ဗွီ ထိပ်သီးအစည်းအဝေး အစီအစဥ်နှင့် ထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွင် ထုတ်ပြန်မည့် ပူးတွဲကြေညာချက်မူကြမ်းများအား ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
တက်ရောက်လာသော စီအယ်လ်အမ်ဗွီ (၄)နိုင်ငံမှ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများသည် စီအယ်လ်အမ်ဗွီ နိုင်ငံများအကြား စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှု ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၊ ကုန်သွယ်ရေးနှင်‌့ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဥ်များနှင့် နိုင်ငံတကာနှင်‌့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မြှင့်တင်ရေးတို့အား ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။